Imithetho Yomnikazi Wendawo Eqashisayo Ngommeli Wezingxabano Zokuqasha Uchwepheshe 2022
Imithetho Yomnikazi Wendawo Eqashisayo Ngommeli Wezingxabano Eziqashisayo Ngochwepheshe Ka-2022
I-Dubai Landlord kanye Nomthetho Womqashi
Izingxabano zokuqasha zingenye yezingxabano ezingokomthetho ezivame kakhulu emhlabeni jikelele, futhi i-United Arab Emirates nayo ihlukile. Izindleko ezishibhile zokunakekela kanye neholo elibalulekile lokuqasha yizimbangela ezimbili ezivame kakhulu zokungqubuzana kwezindawo zokuhlala. Uma kuqhathaniswa namanye amazwe, i-UAE inomoya wesikhashana ngenxa yenani elikhulu labaphuma kwamanye amazwe abahlala lapho.
Ngaphezu kwalokho, umnotho wemakethe eqashisayo wenyuka kakhulu ngenxa yabakwamanye amazwe abangabanikazi bezakhiwo e-UAE. Umgomo oyinhloko walaba banikazi bezindawo uwukukhulisa imali engenayo ngezinkokhelo eziqashisayo kuyilapho beqinisekisa ukuvikeleka kwamalungelo abo, okuyilapho kungena khona Ummeli Oyingcweti Wezingxabano Zokuqasha.
Ngenxa yalokho, uhulumeni we-UAE wenze uMthetho Wokuqashisa, osungula imithethonqubo eyisisekelo yokuphothulwa nokubhaliswa kwezivumelwano zokuqasha nezokuqashisa. Umthetho wokuqasha nawo uqukethe amalungelo nezibopho zabanikazi bezindlu nabaqashi.
Ngenxa yezici ezihlukahlukene, kuhlanganise nokungaqiniseki kwezomnotho, indoda evamile ayikwazi ukubhekana nesimo esinjalo. Ezimweni ezinjalo, kubalulekile ukufuna iseluleko Sommeli Wezingxabano Eziqashisayo.
Izinkonzo Zabameli Ngezingxabano Zokuqasha
Amanani aphezulu okuqasha angumthombo obalulekile wokukhathazeka emnothweni ongaqinisekile we-UAE kanye nomthombo wezingxabano zokuqasha phakathi kwabanikazi bezindlu nabaqashi. Ezimweni ezinjalo, kubalulekile ukuthi zombili izinhlangothi zicabangele ngokucophelela amalungelo nezibopho ezichazwe esivumelwaneni sokuqasha ukuze kugwenywe izingxabano zokuqasha.
Kungcono ukuqasha ummeli e-UAE ogxile engxabanweni yokuqasha, njengoba ebanzi kakhulu olwazini nolwazi lokusingatha izingxabano ezinjalo. Amasevisi Ummeli Wezingxabano Zokuqasha Uchwepheshe e-UAE angawenza ezingxabano zokuqasha ahlanganisa:
Isifundo Sezomthetho: Uchwepheshe Ummeli Wezingxabano Zokuqasha uqeqeshelwe ukubheka umthetho ofanele ngodaba oluthile lomthetho wesiqashi nomnikazi wendawo. Bayakwazi ukufinyelela kusizindalwazi sezomthetho, okungasheshisa futhi kwenze ucwaningo lwamacala lube lula. Ucwaningo lwezomthetho lungazuzisa udaba lwakho ngokukujwayelanisa nezibopho zakho, izibopho, namalungelo njengesakhamuzi kanye nomnikazi wendawo noma oqashile.
Ukuhlola Amaphepha Abalulekile kanye Nokunikeza Iseluleko: Uchwepheshe Ummeli Wezingxabano Zokuqasha angakusiza ekwembuleni izikhala esivumelwaneni sakho sokuqasha. Abaqashi kufanele baqaphele ukuthi abanye abanikazi bezindlu bengeza isigatshana senkokhelo yommeli esivumelwaneni sokuqashisa noma sokuqashisa ukuze bagweme ukumangalelwa kwamacala angenamsebenzi. Uma isivumelwano sakho sokuqasha noma sokuqashisa sinalo mbandela, uzoba nelungelo lokubuyiselwa imali yezindleko zomthetho kanye nezindleko zomthetho uma uwina kumnikazi wendawo.
Ukuze uzijwayeze nomthetho wokuqasha oshaywe nguhulumeni, othi ngaphambi kokuthi umuntu aqashe noma aqashise indlu e-UAE, kufanele kugcwaliswe inkontileka futhi ibhaliswe ne- Ukuthengisa izindlu Iziphathimandla Zokulawula ngaphambi kokuthuthela endlini, ifulethi, nanoma yiluphi olunye uhlobo lwesakhiwo. Izinto ezishiwo esivumelwaneni sokuqasha somthetho wenkontileka zifaka:
Amalungelo nezibopho zomnikazi wendawo
Amalungelo nezibopho zabaqashi
Isikhathi nevelu yenkontileka, kanye nemvamisa izinkokhelo ezizokwenziwa ngazo
Indawo yendawo ezoqashwa
Amanye amalungiselelo adingekayo enziwe phakathi komnikazi wendawo kanye nabaqashi
Uma isivumelwano sesisayinwe ngokomthetho wokuqasha, umnikazi wendawo ubophekile ukuba;
Buyisa impahla isesimweni esihle kakhulu sokusebenza
Qedela yonke imisebenzi yokulungisa uma kukhona okonakele
Gwema noma yikuphi ukulungisa noma wenze noma yimuphi omunye umsebenzi ongase ube nomthelela esimweni somqashi.
Ngokubuyisela, umnikazi wendawo uzokhokhelwa nyanga zonke ngokwenkontileka. Uma umqashi engakhokhi, umnikazi wendawo unegunya lokucela abahlali ukuthi baphume endaweni kuze kube yilapho kukhokhwa. Kulapho abameli abangongoti bengxabano yokuqasha bengena khona ukugwema ukungqubuzana ukuthi kungabhebhetheki ngokusiza abathintekayo ekufinyeleleni esivumelwaneni esamukelekayo esihlomulisa izinhlangothi zombili.
Amalungelo Nezibopho Zomqashiselwa
Uma isiqashi singena endlini eqashiwe ngokomthetho wokuqasha, sinesibopho soku:
Ukwenza ngcono indawo kuphela uma umninindlu evuma
Ukukhokha irenti ngokwenkontileka futhi i-UAE ibeke izintela nezinkokhelo kanye nezinsiza (uma noma yiziphi izinhlelo ezinjalo zenziwe)
Ukukhokha idiphozi yesibambiso lapho uqasha indawo
Ukuqinisekisa ukuthi oBuyisa impahla isesimweni esifanayo, kwakungesikhathi sokuphuma.
Ngaphezu kwalokho, amaqembu angenza amalungiselelo angokwezifiso. Ngokusho kochwepheshe bezombango eziqashisayo, lezi zinhlelo ezenziwe ngendlela oyifisayo kufanele nazo zifakwe kwinkontileka. Izivumelwano zokuqasha zingahlelwa futhi zishintshwe ngokufanayo.
Yiziphi Izingxabano Ezivame Kakhulu Zokuqasha e-Dubai?
Izingxabano ezijwayelekile zokuqasha ezingase ziphakame phakathi komnikazi wendawo kanye nesiqashi zingahluka ekungavumelanini okufana nokuthi:
Irenti engakhokhiwe ngesikhathi esifanele
Ukuhlasela indawo yabaqashi ngaphandle kolwazi lwabo
Ukufuna idiphozi yokuqasha ngaphandle kwesaziso sangaphambili
Ukungalaleli isikhalo somqashisi mayelana nendawo
Ukuvuselela noma ukulungisa indawo ngaphandle kwemvume yomnikazi wendawo
Ukwehluleka kwabaqashi ukukhokha izikweletu zabo.
Ummeli ochwepheshe wengxabano yokuqasha angasiza ekuxazululeni lezi zingxabano nokunye okuningi njengoba kungaba njalo. Baphinde bancome ukuthi zonke izivumelwano zokuqasha zibhaliswe ne Dubai Umnyango Wezomhlaba.
Iyini Imithetho Yokuxoshwa kwe-UAE?
Umthetho ubeka ukuthi ukuxoshwa kufanele kwenziwe kanjani. Lezi imithetho isetshenziswa kanzima e-UAE futhi ikakhulukazi zizuzisa abaqashi. I-Real Estate Regulatory Agency iphethe ukwengamela zonke izindaba eziphathelene nezindlu (i-RERA). I-RERA ingenye yezikhali zokulawula zoMnyango Wezomhlaba wase-Dubai (DLD).
Lesi sikhungo sishaye imithetho elawula ukusebenzisana phakathi kwabaqashi nabanikazi bezindlu. Imithetho ichaza izibopho zeqembu ngalinye kanye nenqubo ehilelekile uma kunengxabano.
Ngokwe-Article (4) yoMthetho (33) ka-2008, umnikazi wendawo kanye nesiqashi kufanele baqinisekise ukuthi inkontileka yokuqasha esemthethweni ibhaliswe ne-RERA nge-Ejari, kanye nawo wonke amadokhumenti aqinisekisiwe.
Ngokwe-Article (6) yoMthetho, lapho kuphela isivumelwano sokuqasha futhi umqashi akaphumi endaweni enesikhalo esisemthethweni esivela kumnikazi wendawo, ngokuzenzekelayo kucatshangwa ukuthi umqashi ufuna ukunweba isikhathi sokuqasha isikhathi esifanayo noma. unyaka owodwa.
Isigaba 25 sicacisa ukuthi umqashi angaxoshwa nini ngesikhathi kusasebenza isivumelwano sokuqasha, kanye nemibandela yokuxosha umqashi ngemva kokuphelelwa yisikhathi kwesivumelwano.
Esigatshaneni (1), seSigaba (25), umnikazi wendawo unelungelo elingokomthetho lokususa umqashi ohluleka ukuthobela noma yisiphi isibopho phakathi nezinsuku ezingama-30 azisiwe ngokuphelelwa yisikhathi sokuqasha. Isigaba somthetho 1 sibeka izimo eziyisishiyagalolunye lapho umnikazi wendawo angase afune ukuxosha umqashi ngaphambi kokuphela kwenkontileka.
Esigatshaneni somthetho (2), se-Article (25) yoMthetho No. (33) ka-2008, umninikhaya kudingeka ukuthi anikeze umqashisi isaziso sokuxoshwa okungenani isikhathi esiyizinyanga eziyi-12 uma efisa ukukhipha isiqashi ngemva ukuphela kwezinkontileka.
Isigaba (7) soMthetho (26) ka-2007 siqinisekisa umgomo wokuthi noma yiliphi iqembu akumele likhansele izivumelwano ezisemthethweni zokuqasha ngaphandle uma zombili izinhlangothi zivumelana.
I-athikili (31) yoMthetho (26) ka-2007 icacise ukuthi uma isenzo sokuxoshwa sesifakwe, umqashi unesibopho sokukhokha irenti kuze kube kukhishwa isinqumo sokugcina.
Ngokwe-Article (27) yoMthetho (26) ka-2007, inkontileka yokuqasha izoqhubeka lapho kushona umqashi noma umnikazi wendawo. Umqashisi kufanele anikeze isaziso sezinsuku ezingama-30 ngaphambi kokunqamula isivumelwano sokuqashisa.
Indawo yokuhlala ngeke ithikamezeke ngokudluliswa kobunikazi bendawo kumnikazi omusha, ngokwe-Article (28) yoMthetho (26) ka-2007. Kuze kube ukuphela kwenkontileka yokuqashisa, umqashi wamanje unokufinyelela okungavinjelwe kuleyo ndawo.
Ummeli Wengcweti Yokuqasha Angakusiza Ukuxazulula
Ingxabano yokuqasha ingaxazululwa uma izinhlangothi zombili zizimisele ukubhekana nezinqubo zomthetho nemithetho eqondisa isivumelwano sokuqasha. Kodwa uma engekho ozimisele ukuthobela umthetho, ukuthintana nezinsiza zommeli ongochwepheshe bengxabano yokuqasha kuzoba inketho engcono kakhulu.